Manager Vakandisvira Nyoro Kubank! Vachibva vandipa futi mari yacho!
Ndakanzwa zimusoro remboro yavo richivhara matinji nehukasha richitsvaga pekupinda napo…
Ndiri mukadzi ane makore 27 and murume wangu ane 35 uye tine mwana achangotanga grade 1. Baba vekwangu vanoshanda muneimwe company muno muharare, vanobuda makuseni vachidzoka zvakare manheru zuva ratonyura. Baba havana nguva neni, uye havandipe bonde, pose pavanouya vanenge vachingoti hee I am tired my lovely wife, heee can’t we do it some other time, heee this and that, apa ini ndinenge ndakaita kudhakwa nezemo, beche rangu rinoita kuzvimba kana rakuda kumedza mboro, muviri wangu unoita kuvhita vhita nekuda bonde. Uyu ndowainge wangova mugariro weshuro kushaya nyanga. Ndaigona kudhonza vhiki mbiri, ndozongonzi kwaru kwaru zve2­-3 minutes vobva vati vatunda zvavo murume anenge atopedza basa, hanzi atsunya arwa. Apa ndopandinenge ndaakuda kutanga kupinda mutravelling gear wotonzwa aah game over nehope one time.
Ndakazenge zvino ndaakudzidzira bonyora kupedzisa rwendo rwunenge rwasara. Zvakachizosvika pakuti kana netopo topo yacho pakange pasisina, asi kutsvaga mari here? Murume wangu ndiye muvhimi wemari hapana chandinoda chandinoshaya ini. Asi ndakazochikuvara nenyere too bad. Hapana chinorwadza sekufa nenyota makumbo ari mumvura. Pese pandaifamba ndaingofunga mboro chete. Ndichibika kana kutsvaira ndaitota beche rese ne supu yekuda kusvirwa, ndakapedzisira ndoti nyangwe ndikataura ne murume chero upi zvake beche rangu raizvimba nekubuda tumvura . Semunhu anoita madhiri emari ndakazoenda kubank kwangu ndichidawo mari yekuspinner pablack market, ndisu takatanga nema7% pablack market. Ndakasvikopira nyaya yangu kwapersonal banker uyo akabva andiita refer kuna bank manager. Ndipo pandakasanga namanager uno murefu mu gaint uye ari mushava ndichibva ndazviti nechemumoyo, manager ava vanotondisvira chete.
Manager vakanditi vaisakwanisa kundipa mari sezvo mitemo yenyika yakange yachinja uye RBZ yainge irikuongorora maaccounts evanhu zvemhando yepamusoro chaizvo. Vakataura izvi vachitaridza kuva a very professional man, asi nechemumoyo mati maoneiko shewe? Muchandisvira, uye muchandipa mari yese irimuaccount mangu potse potse neoverdraft. Ndikabva ndademba demba navo ndikavati vakandiwanisa mari yandaida ndaivapa chose chavaida, apo vakaseka zvavo vachiti ndozozvikwanisa here zvavaida, ndakavati hapana chandaitadza uku ndichivanyemwerera neziso resviro chairo ndipo pavakanditi ndidzoke mangwana acho. Mangwana acho ndakapfeka hangu mini yangu ndokubva ndarega kupfeka bhurugwa mukati semunhu aida kuteya shiri yake, ndakasvika pabank beche rese ranzwa nekutota apa ndaitya kuti bank manager vaigona kuramba kundisvira akazoita ma1 ndakabatwa necorrupton. But haa mwana wani iyeye?
Ndakanoka mu office Mabank manager zvikanzi come in, pandakapinda ndavekuda kuvhara door ndakanyepera kudonhedza bank statement yandainge ndakabata ndichibva ndafongora ndakatarisa ku door ndichinhonga apa ndikati dako ndinaro mini yandaive ndakapfeka ndikafongora yaitoburitsa munotangira magaro chaimo. Ndakasumuka hangu ndokunanga pachair ndichiti kuna manager, Good morning. Haaa mhani shuwa vanhu vechirume vari weak, ndakaona murume omedzera mate ndikati ndosvirwa chete nhasi. Takataura hedu asi manager ziso ravo rairamba riri pandiri, vakanditi vainge vanyora email kuheadoffice kwavo uye yainge isati yapindurwa saka ndaizouya masikati ndocheka ndikaona kuti bambo vaive voshaya kuti vonditanga sei saka vaida kundidzosa dzosa ndikati too late ndichibva ndasimuka pachair ndokubva ndazvidonhedza pasi ndokubata gumbo apa ndichinyepera kuti gumbo rangu kamini skirt kakakwira kumusoro zvekuti manager pavakasimuka vachiti sorry meso avo akabva angoona beche rakanga ratoibva zvaro ramirira kupakurwa.
Vakasvikondibata mapendekete vachiedza kundisimudza vanike mboro yavo yakatomira zvayo yakutoda kutsemura trousers re suit yavo. Ndakasimuka naye ndichiyemerera, apa ndichizezerera uye kutya kuti what if akaramba? What if… But haaa varume vese ndoziva pamasituations akadai havashandise pfungwa, but vanofungirwa nemboro, saka ndoyandaifanira kutaura nayo not munhu. Ndakaibata iri mutrouse by mistake pavaindisimudza ndikanzwa maiwe! Zvariri danda zvaro, ndichinyatsoinzwa ichivhita vhita irimo mubhurugwa. Murume mukuru akabva angopusa takatarisana mumaziso. Ndakaona kuti ndikanonoka ndaigona kuruza a golden opportunity yandainge ndawana iyi. Ndakakurumidza kusvika pamuromo ne a killer kiss, vainzwikwa kuti vainge vambobva kurova fodya everest chaiyo, but kasmell kaibuda mumuromo mavo kakabva kaita ndipengeswe nezemo zvekutoshaya kuziva pekubata. I was feeling the presence of a real man who was aggressive to my body and ndozvandinonyatsoda chaizvo. He ravaged my body in no time ndakanga ndave chidhakwa chaicho nezemo.
I still remember ndichidhonzerwa mutoilet door racho richivarwa negumbo, ini I was busy undoing his belt and his trousers. Ndakasvikobata chi handwashing basin apa ndichinyatsovhura makumbo kuti zvikurumidze nekuti ndainge ndanonokerwa kani. Rumwe ruoko rwakanamira pazimboro rematsinga ndichingorisvinyanga svinyanga zvaisava kana nedirection. Ko ndange ndichirikumbonyatsofunga here? Handisati ndambobatwa nezemo mubatirwo uyoyo ini. Ndaingoita ekuona pamaporno movies type yemazimboro iyoyo apa ndakanga ndariwanikidza musi uyu. Rume rakanga roita kufemereka kunge raimhanya marathon apa richiratidza kuti raive nehukasha chaizvo and he was not gentle with me, ndikati its okay lets play it rough ndozvatinotodawo izvozvo. He was in control. Aiita kunge bhinya bhinya maitiro ake and I enjoyed every move yaaiita. Ndakanzwa zimusoro remboro yavo richivhara matinji nehukasha rikutsvaga pekupinda napo, maihwe zvangu ndakanzwa magetsi muviri wese apa ndichinyatsorinangisa paburi racho chairo.
Tight squeezing richitatamura beche apa ini ndichinyatsokotamira ndakatsigira chest pasink. Ndichidzoserera chiuno kumashure kunoritambira ndichisangana naro ndikurungira chikapa pasina nguva ndikanzwa yavemuchibereko chaimo. Pakangoita reflex action ndichisimudza gumbo kutsika pachamber ndikanzwa machende ake akurova matinji pachiita kamwe kanoise kainakidzira munzeve but muzhakirwo wandaiitwa ndainzwa kunge ndaakupenga, muviri wese uchiita kunge waakubaiwa baiwa netsono. Maiwe mboro inonaka iyoyo, ndakangonzwa muviri kugwinha gwinha zvandaisakwanisa kuita control uku maiwe mboro inonaka iyoyo, ndakangonzwa muviri kugwinha gwinha zvandaisakwanisa kuita control uku muviri wangu wose wakaita kutenser, ndakazhambira mudundundu ndichingodzatuka kutunda. Ndakatunda zvekuti ndakambofunga kuti ndaweta ndichinzwa my juice yakuyerera nemathighs angu. Handizive kuti ndakanga ndapedzisira kutundiswa nemboro gore ripi, could not even remember.
Ndakagomera ndichizhambira mudundundu iye achindizhaka nayo very powerful but relaxed. Iye anga asati atunda, ini I was now feeling very weak but ndakanga ndadenha mutunhu unemago. Akaizvomora ndobva ndanzwa muviri wese kubvunda mabvi apera simba, beche richipindwa nemhepo. Akandityora ndokundipfugamisa pafloor, luck mutoilet macho munecarpet. Ndakasetwa position yemabvi nemagokora kunge munhu arikunamata apa mhata dzese mudenga. Akachonjomara achiipfekera ndikanzwa haa ndanikirwa ini, ndichinzwa kuti beche rese rakanyatsonzi ndindindi kuzadzwa nefurniture yababa ava. Murume akasimukira achindibata pabendekete asi kuri nechekumusana uku akaisa weight yake yose pandiri akadhasharara makumbo kunge aida kuita mapush ups achirova mahalf strokes pano nepapo omboiti zete yose okurungira irimo achiivhomora zvishoma nezvishoma achidaro achidaro ndichinakirwa zvangu mwana wemunhu.
Ndakasvirwa neposition iyoyo ndikarova ma multiple orgazm kasingaperi. Ndofunga mufirst five minutes ndakatunda katatu chaiko. Rume rinosvira iroro. Rakazoti rakurovera kuenda iniwo ndikati chikapa ndakaita chekuendera kuchinamwari ichi hachisi chekuverenga mumabhuku zvinoitwa nevamwe. Ndakamukurunga uku ndichisunga mhata kuti beche risvete mboro, ndikanzwa ndakurohwa madeep stroke non-stop ndikati ndoita zvandakadzidzira ini. Rume guru rakatanga kudonha marute ndichinzwa achinyorovesa musana wangu. Ainge ongotaura zvisinganzwisisike ndiye aaahhh Poo!! Poo!! Kunditundira muchibereko chaimo neniwo ndichiputika kutunda hameno kechingani futi. Ungazovaziva kuti ndomanager vemubank vaya vanofinyama finyama vachinyima vanhu mari here ava?
Takapedzerana ndiye rukutu tose pasi. Akandikisa pahuro zvikanzi you are a blast babe, ndikati really? Zvikanzi yes, thank you very much I would love to do this again pakanyatsosunguka. Ndikati pakadai ndingaramba kusvirwa kana mboro ichinaka munakiro uyoyu? Kana imba yacho ichiparara ingaparara zvayo panekugarira nzara. Ndakapihwa mari yandaida ndokubudiswa nedoor rekuseri ndikazonzwa next!
Manager Vakandisvira Nyoro Kubank! Appeared first on VanodaZvinhu.com
Also Read: Masviriro andakaita Mainini sister yemukadzi tichibva kumusha
: Kusvira Nurse Nyoro pavaida kundichecheudza
:Kusvira Dhafu Momo Nyoro:One night stand yakazoita four day stand
Updated: September 7, 2020 — 6:13 pm